Kufananidza pakati peIOS 9.1 B3 uye iOS 9.0.2 pane iPhone 5s | IPhone nhau
Kufananidza pakati peIOS 9.1 B3 uye iOS 9.0.2 pane iPhone 5s
Miguel Hernandez | | iOS, iOS 9
Chimwe chezvinonetsa zvikuru zvevashandisi vane zvishandiso zvine rimwe zera nguva dzese kana iOS vhezheni ichibuda kazhinji inogara yakafanana, ichaita yangu iPhone kuita zvirinani kana zvakanyanya neiyo nyowani vhezheni yeIOS?, Mhinduro yacho iri pachena, kazhinji kacho mhinduro ndeiyi: yakaipa. Nekudaro, kazhinji kazhinji zviri nani kugadzirisa, kwete chete nekuda kwenhau, asiwo nekuda kwekuvandudzwa kwekuchengetedzwa uko kunogadziridzwa kwega kwega uye kunogona kukanganisa kuvanzika kwedu. Kune tariro zhinji dzinoiswa paIOS 9.1, kunyanya mushure meiyo fiasco yatakave nevazhinji neIOS 9, ndosaka tichiunza vhidhiyo yakanyorwa nevakomana kubva kuAppleBytes vanoenzanisa iyo iOS 9.1 Beta 3 mashandiro uye iOS 9.0.2 kushanda pane iyo iPhone 5s.
Neraki, zvinoita sekunge Apple iri kuita basa rakanaka neIOS 9.1 Beta 3, zvinoita sekunge zvirinani, kunyangwe iri shoma, inoratidza nekukurumidza kupfuura yaakatangira iOS 9.0.2, saka ichine nzvimbo yekurangarira uye inogona kumutsidzira zvimwe kana zvichikodzera michina senge iyo iPhone 5. Kuvhura mashandiro beta reIOS 9.1 rakareruka zvishoma, saka kana uine iyo iPhone 5s kana gare gare, iwe unofanirwa kunyatso tarisa iyi vhidhiyo iyo inogona kukuita uchinyemwerera paunoona kuti Apple haisi kufunga nezve kubaya yako idiki ina-inch iPhone.
Mune imwe vhidhiyo iyi vaida kuenzanisa kumhanya uye iOS 9.1 Beta 3 mashandiro maringe neIOS 9.0.1, zvakare inoratidza yekumusoro kumhanya uye kuyerera, iyo inotumira glimmer yetariro kune vese vashandisi veIOS, vese vatsva uye veterans, pasina kupokana.
Tim Cook akatotivimbisa izvi nekusvika kweIOS 9 uye zvainge zvisina kudaro, mabugs anoitika vhezheni mushure mevhezheni uye zvinoita sekunge hairove kiyi, zvisinei, zvinoita sekunge mwenje diki unodururwa pairi, isu uchafanirwa kumirira Gumiguru kana Mbudzi kuti uone kuberekwa kweIOS 9.1 mumidziyo yedu neiyo Pro Pro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Kufananidza pakati peIOS 9.1 B3 uye iOS 9.0.2 pane iPhone 5s
Ndo izvo zvaunofanirwa kuenzanisa hazvisi pakati peshanduro dzeIOS 9, izvo zvinonyatsodiwa nevashandisi kufananidzwa kweIOS 9.1 neIOS 8.4, izvo zvakapusa ... Nekuti izvo zvatinofunga kugadzirisa kubva iOS 8 kuenda kuIOS 9.
Zvinoshamisa kuti Apple yakazivisa iOS 9 yakanyatsogadzirirwa mashandiro, uye kana Push ikauya kuzosundidzira, zvakatoipa. Isu tinoshandisa maeuro mazana manomwe pahunhu, vanotitengesera mhando uye software yakasarudzika yehardware, uye kana Push ikauya kuzosundidzira inoita kunge Android izere notupukanana, uye kuita kwakaipisisa gore rega rinopfuura.
Kana tikabhadhara Apple ndeyemhando, isina chaipo mashandiro uye mashandiro. Uye isu tinowana gore rega rega rinopfuura zvakanyanya kuita. Uye zvese nekuti Apple rave kambani inogadzira mari pachinzvimbo chehunhu tekinoroji.
Uye mushandisi ane iyo iPad 3 uyo Akadzikiswa kubva kuIOS 9 kuenda kuIOS 8 anokuudza kuti uone nyonganiso yaitwa ...
Juanbartolomiu Carreño Carreño akadaro
zvakashata kudaro ??? Ndine ipad 3… Muna ios 8 zvinorwadza, zvakatoipisisa muna ios 9 ???
Pindura Juanbartolomiu Carreño Carreño
Ngatione, kuenda kuri kufamba zvakanaka. Ini ndakakwidziridza kuenda kuIOS 9 uye ikamonyoroka, asi ivo vakabviswa pakukwiridzira kusvika 9.0.1 uye 0.2. Dambudziko iro kunyangwe nekuvandudzika, richiri rakaderera mvura pane iOS 8.4.
Nenzira, muvhidhiyo, iyo fananidzo pakati peIOS 9.0.2 na9.1b3, ini handioni musiyano.
Maitiro ekunyarara zvachose Siri (ndoda)
Amazon icharega kutengesa Apple TV muzvitoro zvayo